The Electric Kid လို့တင်စားခံရတဲ့ Adam Lansing! – AutoMyanmar
The Electric Kid လို့တင်စားခံရတဲ့ Adam Lansing!
Adam Lansing ဟာ ဓာတ်ငွေ့ကားကို လျှပ်စစ်သီးသန့်ကားတစ်စီးဖြစ်သွားအောင်ဖန်တီးပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တာကြောင့် The Electric Kid လိုတင်စားခံရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူပြောင်းလဲဖန်တီးလိုက်တဲ့ကားကတော့ အင်ဂျင်မဲ့ Toyota 1980 Celica ကို ၁၃၀ mile range ရှိပြီး 94 lithium ion ဘက်ထရီ အသုံးပြုထားတဲ့ လျှပ်စစ်ကားဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တာပါ။
ဇာတ်လမ်းကတော့ Lancing ၁၂ နှစ်အရွယ်ကစတာပါ။ Lancing ဟာ ၁၂ အရွယ်ထဲကတည်းက ဓာတ်ငွေ့ကားကနေ လျှပ်စစ်ကား ကိုပြောင်းလဲချင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကိုကြားမိတဲ့ Lancing သူငယ်ချင်းရဲ့ အဖေဟာတော့ Lancing ကို အင်ဂျင်မဲ့ Toyota Celica ၁၉၈၀ ကို ယုံကြည်မှုတွေနဲ့ ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
“I thought that wasareal drag, But the true inspiration came from watching YouTube clips ofaman named John Wayland, who converteda1972 Datsun 1200 intoahigh-powered electric dragster he called “White Zombie.”
“I saw the way that it shot off the line on the drag strip. So I did more research,” Lansing says.
Lancing ကအဲ့ဒီကိစ္စအတွက် အိုင်ဒီယာ ရခဲ့တဲ့အဓိကအရင်းအမြစ်ကတော့ သူ့အစ်ကိုရဲ့ စကားသံတွေကပဲဖြစ်ပါတယ်။ အစကတော့ အရမ်းကြီးမဟုတ်ပေမယ့် John Wayland ရဲ့ YouTube က ဗီဒီယိုကိုမြင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ အစီအစဉ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပိုပြီးစိတ်အားထက်သန်လာခဲ့ပါတယ်။ အကောင်အထည်ဖော်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကြောင့် Lancing ဟာလေ့လာမှုတွေပိုမိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ်မှာတော့ Lancing ဟာ Celica ပြောင်းလဲမှုရဲ့ အဓိကအစိတ်အပိုင်းတွေရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ၁၆ နှစ်အရွယ်မှာတော့ ဖန်တီးမှုကစတင်အလုပ်လုပ်ပြီး ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ကားနဲ့ ကျောင်းကိုတော့ မောင်းသွားပါသေးတယ်။ အရမ်းပြည့်စုံနေတဲ့အဆင့်မရောက်သေးတာကြောင့် Celica ဟာကျောင်းကအပြန်မှာတော့ ရပ်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ Lancing ဟာအဲ့ဒီအချိန်ကနေ နောက် ၆ လအထိ Celica ကိုမပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
၆ လတိုင်အထိပြင်ဆင်မရခဲ့တာကြောင့် အဲ့ဒီအချိန်ကတော့ Lancing အတွက်စိတ်ဓာတ်အကျဆုံးအချိန်ပေါ့ဗျာ။ စိတ်ဓာတ်ကျနေပေမယ့်လည်း Lancing ဟာ ပြင်ဆင်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြင်ဆင်လို့မရသေးပေမယ့် ၆ လအတွင်း Lancing ရဲ့စိတ်ရောကိုယ်ပါကြိုးစားမှုတွေကြောင့် အဖြေနဲ့တော့ တဖြည်းဖြည်းနီးစပ်လာခဲ့ပါပြီ။
စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့လူတစ်ယောက်အတွက်အကူအညီဆိုတာမဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။ အပေါ်မှာဖော်ပြထားတာကြောင့် Lancing စိတ်ဓာတ်အရမ်းကျနေတဲ့အချိန်မှာ အကူအညီပေးခဲ့သူတွေနဲ့ ကူညီမှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လို အကူအညီတွေကြောင့်ပဲ Lancing ဟာ ၂ နှစ်အကြာ အသက် ၁၈ နှစ်မှာတော့ The Electric Toyota Celica ကိုဖန်တီးပြောင်းလဲ နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ကြိုးစားမှုတွေနဲ့ အလျှော့မပေးတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကြောင့်အခုလို အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မကြာခင်အချိန်အတွင်းမှာပဲ Lancing ဟာကိုယ်ပိုင် ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီအမည်ကတော့ Hawkeye Innovations LLC ဖြစ်ပြီးရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဓာတ်ငွေ့ကားတွေကို လျှပ်စစ်ကားအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးဖို့ပါ။ Lancing ဟာသူ့ရဲ့ပန်းတိုင်ကိုအဆုံးထိရောက်အောင်ကြိုးစားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ သူ့ရဲ့နောက်ပန်းတိုင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Hawkeye ကုမ္ပဏီအတွက်ရောဘယ်လိုတွေဆက်ပြီကြိုစားသွားမလဲဆိုတာကိုတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။